dentures – Healthy Life Journal
All posts tagged "dentures"
အံကပ် ကြာကြာခံစေဖို့ . . .
မေး. ကျွန်တော်အံကပ်တပ်ထားရပါတယ်။ အံကပ် ကြာကြာခံအောင် ဘယ်လိုထိန်းသိမ်းသင့်ပါသလဲ ဆရာ။ ဦးလှမင်း၊ ပန်းဘဲတန်း။ ပါမောက္ခဦးကိုကိုမောင် မေးရိုးနှင့် ခံတွင်းခွဲစိတ်ဆရာဝန်ကြီးမှ ဖြေကြားပေးပါသည်။ ဖြေ. အံကပ်ဆိုတာမျိုးက တစ်ချိန်လုံး တပ်မထားသင့်ပါဘူး။ ဖြစ်နိုင်ရင် အံကပ်တပ်တဲ့အချိန်က တစ်နေ့လုံးမှာ အချိန် ရှစ်နာရီ- ၁၀...